Kulolu chungechunge lweMazda Titan, amaloli amakhulu kunawo wonke ayethulwa. Kukhona izinhlobo eziningi nokuguqulwa kwalomshini. Zakhiwa ngekhono lokuthwala amathani ayi-1.5 kuya kwangu-3. Lo mkhiqizo uvame kakhulu eYurophu naseRussia.
Ukuthuthukisa umklamo wemoto, abasebenzi basebenze kanzima emnyango wezimoto, ukuze kulungiswe igama layo. Isizukulwane sokuqala sabonakala ngo-1971. Ezweni lakubo, izimoto ngokushesha zanqoba ukuzethemba komthengi futhi zisadingeka kakhulu.
Imoto yokuqala ye-Mazda Titan yayiyiloli elikhanyayo. Ngokushesha wathandwa emakethe. Ngaphezu kwalokho, ukuqala kokukhiqizwa kwalo kuhambisana nokwanda kwamanani amaloli.
Ukuzibandakanya kwenzeka ngo-1980, lapho inguqulo yesibili yale moto imshicilelwe. E-Russia, lo modeli usebenza kuze kube yilolu suku, kunalokho kubonisa ukwethembeka kwawo. Engabizi enkonzweni, ukubuyekezwa, iqoqa kuphela okuhle.
Ngo-1989, kwavela isizukulwane sesithathu iMazda Titan.
Lolu chungechunge lunombalo omkhulu wokuguqulwa. Ububanzi buhlanganisa amaloli ayikhulu, ahluke kumagagasi, amakolishi, izinjini. Emigwaqweni ungathola ngisho ne-Mazda Titan dumper.
Amandla okwenza lo moto ahluka kusuka kumathani ayi-1.5 ukuya kwangu-4. Ukuhlukanisa imishini yamathani amabili kunamakhomikhali wendawo ekhuphukile, futhi ifakwe nesisekelo esisodwa. Kwezinye i-Titans ezinokukhokha okuncane ukuthumela okuzenzakalelayo kufakiwe.
Kuthengiswa kukhona izimoto ezinezinjini ezine-cylinder injini. Ngama-90s, ukuthengwa kwezinjini ezivela ku-Isuzu kwaqala, kulandelwa ukufakwa kwazo kwezinye izinhlobo ze-Mazda Titan.
Eminye imishini yamathani amathathu, ama-cabin amabili ahlala phansi amabili aphakanyisiwe. Umthamo wokuthwala wancipha waba ngamathani ayi-2.75.
I-Mazda Titan yakhiqizwa isikhathi eside - iminyaka engu-11. Kodwa-ke, izinguquko zafezwa: izinjini ezintsha zaziswa, futhi izinguquko zokuzithokozisa zenziwa.
Unyaka ka-2000 umakwe ngokukhululwa kochungechunge lwesine lwale moto. Lo modeli awukawina umakethe waseRussia. Imithwalo yokuthwala yalezi zimoto ezintsha zahlala zifanayo.
Izinhlobo ezintathu zamasondo ziyisisekelo: I-Super-Long Body, i-Long Body and Standart Body. Ukulayisha amapulatifomu ahlukaniswe abe izinhlobo ezimbili: aphansi futhi ajwayelekile.
Umthengi angakhetha noma yiliphi injini ye-diesel evela emine izinhlobo, ezinamandla angu-133 hp, 123 hp, 108 hp. Futhi 91 hp. Futhi emgqeni womodeli kukhona injini yegesi ezine-litre eveza 88 hp.
I-Titans enomthwalo wokuthwala amathani angu-3.5 no-4 ifakwe ukudluliselwa kwejubane le-6. Emalori ane-tonnage encane, ibhokisi legijimi le-5 elivinjelwe lisetshenziswa.
Maphakathi no-2004, i-Isuzu Motors ne-Mazda Motor basayina isivumelwano lapho u-Isuzu enquma khona ukunikeza i-Mazda ngamaloli angaba yizinkulungwane eziyisithupha ze-Elf ezincane ezinyakazayo unyaka wonke. Kuthengiswa ngaphansi kwegama elithi Titan. Kungenzeka ukuthi i-Mazda inqume ukungakheki izinjini ngenxa yokungabi nzuzo kwezimali ezinjalo. Izinguquko eziningi ezimfuno zezemvelo zenze lolu hlobo lomsebenzi luzuze. Kungenzeka ukuthi iMazda yanquma ukugxila emisebenzini yayo ekukhiqizeni izimoto. Kulesi siphetho kwafika iNissan neToyota. Uma lokhu kubonakala kuyiqiniso, ngeke sibone isizukulwane sesihlanu. Nakuba ukuhlolwa kwezimoto ze-Mazda Titan kuchaza kuphela uhlangothi oluhle. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka emakethe.
Freight Exchange: Izinzuzo usebenzisa isevisi
Inqubo izitifiketi zokusebenza
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Actor Styckovsky Yuri Alfredovich: biography, filmography and facts
Ngaphansi kweziphi izimo zemali yentela eyakhiwe nendlela yokubhekana nayo.
Izifundo zolimi lwesiNgisi zizosiza ukufeza impumelelo emsebenzini
Izingxenyana umlando izingxenyana zaso. Umlando ukuvela amafraktjhini